Wrike: Wedzera Kugadzira, Kubatana, uye Sanganisa Yako Yemukati Kugadzira | Martech Zone
Handina chokwadi chekuti taizokwanisa kuitei pasina a kubatanidzwa chikuva yezvatinogadzira zvemukati. Sezvo isu tichishanda pane infographics, chena mapepa, uye kunyangwe blog zvinyorwa, maitiro edu anotama kubva kune vaongorori, kune vanyori, kune vagadziri, kune vapepeti uye vatengi vedu. Ivo vangori vanhu vakawandisa vane chekuita kupfuudza mafaera neshure pakati peGoogle Docs, DropBox kana email. Isu tinoda maitiro uye vhezheni kuitira kusundira kufambira mberi kumberi pane akawanda mapurojekiti ari kuenderera.
Wrike yakanyatsovakirwa kubatana kwemukati - kushanda senzvimbo yepakati yekugadzirisa zviwanikwa zvako zvevanhu pamwe nekubatanidza pamwe nezvivakwa zvako zvekunze. Izvo zvinhu zvinosanganisira:
Basa Rezvipo - Ronga zvese zvaunoda kuti upedze chirongwa chako munzvimbo imwechete. Dambura zvibodzwa zvakakura muzvidimbu zvinogoneka, batanidza mafaera, uye gadza mazuva akakodzera Nyore tarisa kufambira mberi kwese uye mupiro wega.
kutaurirana - @mention vatambi vechikwata iwe vaunoda kuti basa riitwe uye ivo vanobva vaona ipapo yako meseji chaipo munzvimbo yavo yebasa. Iwe unogona zvakare kusanganisira vashandisi vanobva kunze kwekambani yako.
Email Kubudirira - Neimwe chete iwe unoshandura email kuita basa uye wotumira iyo zvakare kuWike kuti iite.
Dashboard - Gadzira maonero anochinja-chinja emapurojekiti akakosha anosanganisira mairafu, mamiriro emabasa, uye mhedzisiro yenguva-chaiyo.
Newsfeed - Zvidzoreso pane zvese zviitiko zveprojekti zvinopa pakarepo mamiriro emamiriro uye kucheka misangano nekutaurirana neemail muhafu kuti ugone kutarisa pazvinhu zvakakosha.
Chikwata Kugadziridza - Hora, govana uye shandira pamwe pane zvinyorwa online uye mune chaiyo-nguva nechikwata chako.
Kupinda Mabhiza - Kupa iwo mwero wakaringana wekutonga kwekuwana, kugadzira mapoka evashandisi vetsika uye nekugovana mafaira nekusarudzika kunovimbisa vanhu chaivo vari kuwana ruzivo rwavanoda kuti ribudirire.
Tsika Workflows - Rongedza maitiro ako uye uwane kuoneka mune basa padanho rega rega. Gadzira yako wega tsika yekufashukira nemaitiro ekubvumidza.
Tsika Minda - Wedzera yako pachako tsika minda kune chero chirongwa kana basa uye tarisa chaizvo izvo zvakakosha kune rako bhizinesi.
Resource Management - Balance zviwanikwa uye track mashandiro kuburikidza neinotsva pasi chati.
Nguva Yekutevera - Chengetedza mashandisiro anoita nguva neprojekti kana nenhengo yechikwata kuronga kwakaringana uye manejimendi manejimendi.
Calendar Integration - Bvumirana mabasa uye zviitiko zvepurojekiti kune chero khalendari inosanganisira Google Calendar, Outlook Calendar, uye iCalendar.
Mobile Applications - Wrike ine zvese zvemuno Android uye iOS Zvikumbiro kuitira kuti iwe ugone kuteedzera uye nekuita mabasa kunyangwe iwe uri kure nedhesiki rako.
Kuti ufambise mberi kugadzirwa kwako, unogona kana kuteedzera chirongwa, kutevedzera mabasa ekupihwa uye kunyange mazuva.
Wrike inopawo kubatanidzwa neGoogle Apps, Chrome, Dropbox, Bhokisi, Microsoft Project, Microsoft Excel, Microsoft OneDrive, SAML, Salesforce, iCal, Zapier, Evernote, Wufoo, HipChat, WordPress, Slack (yatinoda), Zendesk, Hubspot, Quickbook, LinkedIn, Marketo, ProofHQ, Kukohwa, SurveyMonkey, Okta, uye Bitium!
Saina Kuti Unyore Muedzo paWike
Ingori katsamba - isu tiri kushandisa zvakabatana zvinongedzo mukati meichi chinyorwa.
Tags: bitiumbhokisiChromekubatirana zvemukatikugadzirwa kwemukatizvemukati zvemabasazvemukati kufambiswa kwebasazvemukati workflowsDropboxEvernotegoogle appsgohwoHipchathubspotiCalLinkedInmarketoMicrosoft ExcelMicrosoft OneDriveMicrosoft ProjectoktawdcQuickbookssalesforceSAMLusimbeSurveyMonkeyWordPressWrikewufoozapierzendesk
Ndeipi Impact uye Imwe nzira kune Ad Kuvhara?